Wargeysyada naqshadeynta garaafka ugu fiican | Hal-abuurka khadka tooska ah
Naqshadaynta sawirada iyo farshaxanka dhijitaalka ah ayaa gacanta ku wada socday muddo dheer si ay u muujiyaan hal-abuurka ka dambeeya iyaga si joogto ah u beddela saamaynta iyo isbeddellada faneed.
Joornaallada naqshadeynta ayaa ahaa oo noqon doona mid ka mid ah taageerooyinka aasaasiga ah ee tababarka xirfadlayaasha qaybta ee fanka, iyaga oo ay ugu mahadcelinayaan waxay la socdaan isbeddellada adduunka naqshadeynta.
In kasta oo ay yihiin bulsho ku xidhan shaashadda ku dhawaad ​​24 saacadood maalintii, haddana waxaa jira dad si jir ahaan u iibsada majaladda. Qaar badan oo ka mid ah joornaalada naqshadeynta waaweyn way adag yihiin oo ma diidaan fikradda ah inay sii wadaan khamaarka dhaqanka iyo habka tafatirka, taas oo ay sii wadaan daabacaadda joornaalada.
Ma tahay farshaxane, naqshadeeye ama ma waxaad xiisaynaysaa horumarradii ugu dambeeyay ee adduunka naqshadaynta? Hagaag, maqaalkan waxaan kuugu soo bandhigi doonaa joornaalada naqshadeynta ugu fiican si aad ula socoto dhammaan isbeddellada ugu caansan.
Waad heli kartaa tixraacyada adduunka oo dhan maxaa kugu qaadan doona inaad ogaato wararka wakhtigan oo kugu wargeliyay oo kugu dhiiri galiya.
1 Majaladaha naqshadeynta garaafyada ee ugu fiican ee internetka
6 Joornaalka naqshadeynta garaafyada ugu fiican ee Isbaanishka
11 Joornaalada naqshadeynta kale
15 CAP & Naqshad
Majaladaha naqshadeynta garaafyada ee ugu fiican ee internetka
Asal ahaan Giriigga, majaladdani waxay kor u qaadaa abuurista muuqaal, taas oo ah, naqshadeynta garaafyada, sawir-qaadista, wararka ku wareegsan naqshadeynta shabakadda iyo alaabta. Waxay soo baxdaa suuqa 6dii biloodba mar waxayna dadka ku dhiirigelisaa inay bartaan naqshadaynta garaafka, waxay qabataa shirar, tartamo, bandhigyo, iwm.
Mid ka mid ah joornaalada ugu caansan, oo la daabaco saddexdii biloodba mar. Bogaggeeda dhexdiisa waxaan ka heli karnaa falanqaynta dhaqanka muuqaalka. Waxay ka hadlaysaa taariikhda naqshadeynta, typography, hal-abuurka ugu muhiimsan ee qaybtan.
Asal ahaan Faransiis iyo daabacaadyo maalinle ah oo ku yaal shabakadeeda. Joornaal muhiim ah oo dalkaaga ka jira sida ay muujinayso sida panorama nashqaduhu uga jiro dalkaaga iyo caalamkaba. Waxay si gaar ah u xuseysaa Panorama-ka Isbaanishka iyo Laatiin Ameerika, shaki la'aan waa joornaal ay tahay inay had iyo jeer u dhowdahay oo tixraac ahaan.
Waa ururka naqshadaynta xirfadleyda ee Finland. Waxay keentaa wararka naqshadeynta garaafyada u dhow taageerayaasheeda. Ururkan oo ay ka kooban yihiin in ka badan kun qof ayaa qabta howlo kala duwan marka laga reebo soo bandhigida majaladda ay soo saaraan, howlo ay ka mid yihiin siminaaro, tartamo, munaasabado iyo kuwo kale.
Joornaalka naqshadeynta garaafyada ugu fiican ee Isbaanishka
Majaladdani waxa ay samaysaa go’aan cad marka ay timaado xayaysiinta fanaaniinta iyo mashruucyadooda halabuureed. Waxay dhalatay 2009 waxayna ka hadashaa mawduucyo ay ka mid yihiin hal-abuurka, hal-abuurka iyo naqshadaynta, iyadoo mar walba la tixgalinayo isbeddellada ugu badan ee dhaqanka iyo naqshadaynta.
Waxaan ka heli karnaa nooca dhijitaalka ah ama lagu daabacay warqad. Nooca dhijitaalka ah waxaa jira ikhtiyaar lagu abuurayo wadahadal u dhexeeya tifaftirayaasha iyo akhristayaasha, taas oo ah, waxaan gelin karnaa fikraddayada ama shakiyadayada waxaanan heli doonnaa jawaab celin ku saabsan.
Waxaan ka heli doonaa joornaalka daabacan bishiiba waxaanan ku haysan karnaa gurigayaga iibsashada mareegaha majaladda.
Magazine asal ahaan Valencian, oo leh qaab miyir qaba oo diiradda saaraya adduunka naqshadeynta garaafyada iyo sawirka. Waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah majaladaha Isbaanishka ee ugu muhiimsan maanta oo leh ku dhawaad ​​​​500 kun oo akhristayaasha bishiiba inta u dhaxaysa Spain iyo Latin America.
Mararka qaarkood, marka lagu daro ka hadalka dhacdooyinka hadda ka jira adduunka naqshadeynta iyo waxa ku xeeran, waxaad ka heli kartaa mawduucyo kale oo ku saabsan isgaarsiinta, dhacdooyinka, shirarka, iwm.
Waxaa laga iibsan karaa meelo kala duwan oo iib ah Spain oo dhan ama iyada oo la iska diiwaan gelinayo shabakadeeda.
Joornaal ku dhashay Madrid 1989 oo ku saleysan dhinacyada naqshadeynta, hal-abuurka iyo isgaarsiinta. Joornaalku wuxuu soo maray isbeddelo taariikhda oo dhan wuxuuna awooday inuu la qabsado isbeddelkan qaababka.
Waxay faafisaa nuxurka naqshadaynta laakiin sidoo kale mawduucyada sawir-qaadista, sawirka iyo tignoolajiyada cusub iyo kuwa kale.
Waxaan ku heli karnaa is-diiwaangelin waxaana lagu daabacaa daabacaad labadii biloodba mar. Maqaallo kala duwan ayaa todobaadkiiba mar lagu soo daabacaa mareegaha Internet-ka iyadoo tixraacaysa mowduucyadii aan horay u soo sheegnay.
Waxaa markii ugu horreysay la daabacay 1989-kii, waxaana lagu daabacay caasimadda Spain ee Madrid. Waa mid ka mid ah majaladaha hormuudka ka ah dhanka naqshadeynta garaafyada iyo naqshadeynta in ka badan 50 waddan, sidoo kale waxay kor u qaadaysaa xiriirka ka dhexeeya qaybaha kala duwan ee warshadaha, taas oo isku mid ah ka dhexeeya naqshadeeyayaasha iyo ardayda. Waxay kor u qaadaysaa qiimaha hal-abuurka ah ee ka dambeeya mashaariicda ay muujiso iyo hal-abuurka dhaqameed.
Waxaa lagu daabacaa saddexdii biloodba mar qaab jireed iyo shabakadeeda iyada oo loo sii marayo bakhaarkeeda.
Joornaalada naqshadeynta kale
Waa joornaal ay tafatireen ardayda, oo leh qoraallo tayo sare leh oo nagu martiqaadaya inaan wax ka barano mowduucyo gaar ah iyo shaqada naqshadeeyayaasha kala duwan. Sidoo kale shahaadada bachelor-ka iyo masters-ka, markaa tani waxay keenaysaa isha macluumaadka kuwa xiiseynaya naqshadeynta garaafyada.
Komma waa daabacaad lacag la'aan ah, haddii aad ku biirtona waxay kuu soo diri nuqulka joornaalka si loo daabaco sida ugu dhakhsaha badan.
Markii ugu horreysay waxaa lagu daabacay Tokyo 1953. Diirada saarneyd adduunka isgaarsiinta muuqaalka, naqshadeynta iyo qoraallada. Waxay ka hadlaysaa mawduucyo ku saabsan dhammaan qaababka naqshadaynta ee ku wada nool Japan.
Waxaa lagu daabacay Jabbaan iyo Ingiriis labadaba waxaana la heli karaa si ku saleysan isdiiwaangelinta sannadlaha ah.
Jarmal Jarmal ah oo bixisa sida ugu fiican ee naqshada garaafyada casriga ah, sawir-qaadista, sawir-qaadista, naqshadaynta qoraalka, shirkadda oo siisa meel muhiim ah karti cusub.
Novum waxay leedahay taariikh weyn oo ka dambaysa taas oo ka dhigaysa il weyn oo tixraac ah.
CAP & Naqshad
Joornaalka Iswiidhishka oo leh nooc online ah oo leh toban arrimood oo la daabaco sannadkii oo ka hadlaya horumarka cusub ee isgaarsiinta muuqaalka. Looga danleeyahay xirfadlayaasha sida isha macluumaadka iyo dhiirigelinta naqshadeynta garaafyada horumarinta wanaagsan ee fikradaha garaafyada.
Joornaallada naqshadeynta ayaa naga caawiya inaan la socodsiino wixii cusub iyadoo dunidan si joogto ah isu beddesho. Waxay daaqad wanaagsan u yihiin dhiirigelinta mashaariicda mustaqbalka. Kuwani waxay ku siinayaa fursad aad ku kasbato aqoon cusub markaad baranayso isbeddellada cusub.
Miyaad akhriday mid ka mid ah wargeysyadan? Ma ogtahay wax dheeraad ah oo aad u samaysay tixraac naqshadeeyayaasha garaafyada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Majaladaha naqshadeynta garaafyada ugu fiican